Maqal: Higaankii Buuraleyda Galgala ee Alshabaab oo isku dhiibay DFS – SBC
Maqal: Higaankii Buuraleyda Galgala ee Alshabaab oo isku dhiibay DFS
Posted by Webmaster on Juun 7, 2014 Comments
Hogaamiyihii Xoogaga xarakada Alshabaab ee Buuraleyda Galgala ee gobolka Bari puntland Sheekh Maxamed Siciid Atam ayaa maanta isku dhiibay dowlada federaalka Soomaaliya.
Sh Maxamed Siciid Atam ayaa isku dhiibay dowlada federaalka Soomaaliya isagoo gaaray magaalada Muqdisho Caasimada Soomaaliya isagoo shir jaraaid oo uu saxaafada u qabtay ku shaaciyay in uu isku soo dhiibay Dowlada Soomaalia
“In muddo ah ayaan u dulqaadanayay horjoogaha kooxda Al-Shabaab ee Axmed Godane, laakiin maanta waan isaga tanaasulay sababo jira awgeed, waxa ay baneysteen dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah, waxa ay baneysteen dhiigga Culimada ay isku qilafaan ka run sheegidda shareecada Islaamka, marka arrimahaasi ayaa ugu waa weyn, cafis ayaana dalbanayaa intii aan ka dagaalamay Buuraleyda Gal gala ” sidaasi waxaa hadal ku yiri Sheekh Atam xiligii shirka jaraaid u qabanayay warbaahinta Muqdisho.
Atan ayaa sidoo kale ka sheegay 7 qodob shirka jaraaid ee uu qabtay kuwaas oo sida uu ku sheegay ahaa fariin waxaana ka mid ahaa.
1-Waxaa dhalinyarada loo sheegay in loo dagaalamayo iskuxirka shareecada islaamka, dadkana waxbay ka xukumaan, haddana Axmed iyo shabakadiisu shareecada ma qabato umana hogaansamaan.
2-Waxey baneysteen dhiiga shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah, sidaas darteed waxey ku laayaan suuqyada, jidadka ilaa masaajidka.
Waxey baneysteen dhiiga Culumada Muslimiinta iyo qof kast oo muhiim ah oo ay mas’alo isku khilaafaan, ilaa culumada ku dhex laayaan masaajida dhexdeeda.
3-Jihaadku waa Cibaado Allaah baa iska leh, waa wax laga doonaayo muslimiinta oo dhan, weliba iyagoo isku duuban. Axmed Cabdi waxa uu ka dhigtay wax uu isaga iska leeyahay, sidaas daraadeed, waxuu amar ku bixiyey in la laayo, hubkana laga qaato cidii kale ee hub qaadata, waxeyna ka dhigaan mid ay dilaan, mid ay xiraan, mid ay duleeyaan iyo mid iskaga carara.
4-Xagga shacabka qaxa iyo rafaadka ay ku jiraan wax naxariis ah uma hayaan, waxeyna ku sameeyaan, cunaqabateyn dad maato ah oo muslimiin ah oo tabaaleysan.
5-Waxaan u sheegayaa dhalinyarada qofka shabaab ka tagay, ma aha qof islaanimada ka tagay, qofkii fikirkooda dhaliilana ma aha qof diinta islaamka wax ka sheegay. Maxaa yeelay, islaanimadu waa diin ee ma aha dad gaar ah fikirkood.
6-Dadka muslimiinta ah waa ay is khilaafi karaan, laakin ilaahay waxuu amray inay kitaabka iskula noqdaan iyaguna midoobaan, labadaas arrimood Axmed iyo shabakadiisa waa lagala quustay ,Midnimo umadeed iyo marjac kitaab midna ma rabaan, Sidaas daraadeed, waxaan tuhunsanahay inaanay ka marnayn dano shisheeye.
7-Haddaba waxaan cadaynayaa inaan maanta waxii ka danbeeya aan mabaadiidayda iyo fikirkeyga aan ku gudbisan doono qaab nabadeed iyo Isfaham, arrinkaasna waxaan isla garanay dowladda Soomaaliyeed. Waxaanan uga mahadcelinayaa sida la ii soo dhoweeyey.
Dhageyso Hadalka Sheekh Attam,RIIX AMA DAAR